Galmudug oo Ciidamadii ugu badnaa geysay Koonfurta Gobolka Mudug & xaalad… - Awdinle Online
Galmudug oo Ciidamadii ugu badnaa geysay Koonfurta Gobolka Mudug & xaalad…
Maamulka Galmudug ayaa Ciidamo farabadan oo aad u hubeysan kana tirsan kuwa Daraawiishta waxaa ay geeyeen degaano ka tirsan Koonfurta Gobolka Mudug, halkaas oo la sheegay inay dhawaan dhaq dhaqaaqyo ka bilaabeen Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Ciidamada oo wata Gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa la geeyay Degmada Wisil, degaano ka tirsan Dooxada Dibir iyo degaano kale, halkaas oo la sheegay in ay maalmaha soo socda howlgallo kala duwan ka bilaabi doonaan.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Galmudug ayaa waxaa ay sheegeen in ujeedkooda uu yahay sidii degaannada ku yal koonfurta gobolka Mudug oo ay ku sugan yihiin Al-Shabaab looga saari lahaa, isla markaana amniga loo adkeyn lahaa.
Saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in degaannada Ciidamada la geeyay inay booqdaan wasiiro uu kamid yahay Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi, su ay uga qeyb qaataanb abaabulka guluf dagaal ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Dadka degaannada Ciidamada la geeyay ayaa waday maalmahaan abaabul ku wajahan la dagaalanka Al-shabaab kuwaas oo hadda xoojin doona Ciidamada Galmudug, si lamid ah degaano kale oo ka tirsan Gobolka Mudug oo ay kula dagaalameen Al-Shabaab.
Dhowr Bilood ka hor ayaa degaanka Bacaadweyne ee Koonfurta Gobolka Mudug waxaa dagaal culus uu ku dhex-maray Ciidamada dowladda qeybta 21aad oo garab ka helaya dadka degaanka & Al-Shabaab wallow dhawaan ay degaanka Bacaadweyne ay dib ula wareegeen Al-Shabaab.
Previous articleSida uu u dhacay dilkii gudoomiyihii degmada Hodan oo la soo bandhigay
Next articleMadaxweyne Muuse Biixi oo la kulmay Guddiga doorashooyinka Somaliland